Thursday .9July . 2020
မာယာချို ဘက် ကနေ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ပေးလိုက်တဲ့ ကာတွန်း ဥက္ကာကြည်ဝင်း
မကြာသေးခင်နာရီပိုင်းအတွင်း က လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပွဲဆူခဲ့တဲ့ မယားငယ်လေး မာယာချို ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာ ကြည့်ရှုသူတိုင်း ကို ဒေါသတွေဆူပွက်စေခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား မယားငယ်မလေး ဘက်က နေ ဦးဦးဖျားဖျား ရပ်တည်ပေးလိုက်သူတစ်ယောက် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ သူကတော့ နိုင်ငံကျော် ကာတွန်းဆရာ ဦးဥက္ကာကြည်ဝင်းပါ ။
ဥက္ကာကြည်ဝင်း ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ “မနေနိုင်လို့ ဝင်ပြောလိုက်ဦးမယ်။မယားငယ်မကလို့ မယားလေး၊ မယားသေး၊ မယားပိစိကွေးပဲ ဖြစ်နေပါစေ။ ယုတ်စွဆုံး ငွေကြေးယူပြီးပျော်ပါးရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာပဲဖြစ်နေပါစေ။
တရားဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကိုရသင့်တယ်။မယားကြီးဆိုတာနဲ့ပဲ လူကြားသူကြားထဲမှာ၊ အထူးသဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ တခြားလူတယောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်တာ တော်တော်ရုပ်ပျက်တယ်။
သတ္တိရှိရင် ကိုယ်တယောက်တည်းသွားဖမ်း။ သူသေကိုယ်သေ ဝမ်းဝမ်းဆွဲကြ။ အေးတာပဲ။ခုကျတော့ အုပ်စုလိုက်သွားပြီးဖမ်းရအောင် လူအယောက်နှစ်ဆယ်လောက်သတ်ထားတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားလည်းမဟုတ်ဘူး။ ကဲ ဟုတ်ပါပြီ။
သက်သေသက္ကာယနဲ့ အပိုင်ဖမ်းတယ်ဆိုလည်း ခုလိုရိုက်မောင်းပုတ်မောင်းလုပ်စရာ မလိုဘူး။ အထူးသဖြင့် ရဲတွေရှေ့မှာပေါ့လေ။တရားဥပဒေဆိုတာ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘူး။မယားကြီး မယားငယ် မခွဲခြားဘူး။လင်ကြီး လင်ငယ် မခွဲခြားဘူး။
ငါသာ အဲ့ဒီကောင်မလေးနေရာမှာဆိုရင်တော့ သူ့ဘာသာသူ တစ်လင်တစ်မယားနဲ့စွဲစွဲ မျိုးစောင့်နဲ့စွဲစွဲ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ယောကျ်ားကို ကာမလိမ်လည်မှုနဲ့ပြန်စွဲမယ်။ မယားကြီးကို သာမန်(သို့မဟုတ်)အပြင်းအထန် နာကျင်စေမှုနဲ့ပြန်စွဲမယ်။ နိုင်လွတ်လုံနဲ့ ပြန်စွဲမယ်။” ဆိုပြီးရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
တရားဥပဒေနဲ့ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေရှိလာတဲ့အခါ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ မှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ အရေးကြီင်္းပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဥက္ကာကြည်ဝင်းရဲ့ ရပ်တည်မှုအပေါ် မှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ကြပါဦးနော် ။
Source – Okka Kyi Win
အင်္ဂလန်ကပြန်လာသည့် အမျိုးသား ၁ ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ
မိုးလယ်ကာလ ဇူလိုင်လ မှ စပြီး မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်း ဒေသများ တွင် ရေကြီးခြင်း မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ် နိုင်ကြောင်း မိုးဇလထုတ်ပြန်
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ဒုတိယအကြိမ် ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးမတွေ့